FOS-P2: ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော Facebook Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁ | Linux မှ
ဤသည်၌ ဒုတိယ အပေါ်ဆောင်းပါးများ၏စီးရီးကနေ "Facebook Open Source" ကျနော်တို့ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ကြီးထွားလာ၏ catalog ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းဆက်လက်ပါလိမ့်မယ် အက်ပ်များကိုဖွင့်သည် ကတီထွင်ခဲ့သည် နည်းပညာဆိုင်ရာiantရာမ de "Facebook".
FOS-P1: ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော Facebook Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁
1 FOS-P2: Facebook Open Source - အပိုင်း ၁
1.1 Facebook Open Source application များ
FOS-P2: Facebook Open Source - အပိုင်း ၁
applications များ Facebook သည် Open Source ဖြစ်သည်
စတင်ခြင်းမပြုမီ၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဖော်ပြသည့်အတိုင်းမှတ်ထားသင့်သည် အပိုင်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် Facebook ၏ Open Source (FOS) ၎င်းကိုမီးမောင်းထိုးပြထားသောအပိုင်း (၁၀) ပိုင်းခွဲခြားထားပါသည်။
Developer Operations များ
ဖွံ့ဖြိုးရေး Tools များ
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပထမ ဦး ဆုံးအပိုင်း ((Android) တွင်ဖော်ပြထားသော application သုံးခုကို ဆက်လက်၍) ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါတို့ရှိသည် -
အတိုချုပ်ထဲမှာ FOS ဤလျှောက်လွှာကိုအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြပါ
"client-side image စာကြည့်တိုက်စာကြည့်တိုက်။ "
သူ့နေစဉ် GitHub အပေါ်က်ဘ်ဆိုက် အောက်ပါအတိုင်းပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာသတ်မှတ်ပါတယ်။
"Spectrum သည်ဘုံပုံရိပ်လုပ်ငန်းများကိုထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဆောင်ရန် Android သို့မဟုတ် iOS စီမံကိန်းတွင်အလွယ်တကူထည့်သွင်းနိုင်သည့် cross-platform image transcoding စာကြည့်တိုက်ဖြစ်သည်။ Spectrum APIs များသည် declarative Feature များကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ဤသည်ကလိုချင်သောရလဒ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းအားဖြင့် developer အတွက်အသုံးပြုမှုကိုလွယ်ကူစေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းသည် Spectrum ကိုအကောင်းဆုံးကွပ်မျက်မှုအစီအစဉ်ကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည်။
နောက်ဆုံးသင့်ထံမှ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် အောက်ပါသတင်းအချက်အလက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြရကျိုးနပ်သည်။
အဆင့်နိမ့် codec စာကြည့်တိုက်များပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်မှီခိုခြင်းအားဖြင့် Spectrum သည်ပလက်ဖောင်းမူဘောင်များနှင့်ထိတွေ့လေ့မရှိသောရွေးချယ်စရာအချို့ကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ထုတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အချို့သော JPEG မှ JPEG လည်ပတ်မှုကဲ့သို့သောဖြတ်တောက်ခြင်းကိုမဆုံးရှုံးနိုင်ပါ။ နောက်ဥပမာတစ်ခုကတော့ဂရပ်ဖစ်ရုပ်ပုံတွေကို JPEG အဖြစ်သိမ်းဆည်းတဲ့အခါအရည်အသွေးတိုးတက်ဖို့ chroma subsampling ကိုပိတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ "
မှတ်ချက်။ ဤလျှောက်လွှာနှင့် ပတ်သက်၍ တရားဝင်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ပါတွင်သင်ရရှိနိုင်သည် link ကို.
"သူတို့သုံးတဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ Android စာကြည့်တိုက်တစ်ခု။
Fresco သည် Android application များတွင်ပုံရိပ်ပြသည့်စနစ်ဖြစ်သည်။ Fresco သည်ပုံများတင်ခြင်းနှင့်ပြသခြင်းအတွက်ဂရုစိုက်ပါသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်မလိုပါ။ ၎င်းသည်ကွန်ယက်၊ ဒေသတွင်းသိုလှောင်မှုသို့မဟုတ်ဒေသတွင်းရင်းမြစ်များမှရုပ်ပုံများကိုဖွင့်ပြီး၎င်းပုံရောက်ရှိသည်အထိနေရာတစ်ခုကိုပြလိမ့်မည်။ ၎င်းတွင် cache အဆင့်နှစ်ခုရှိသည်။ မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာတစ်ခုနှင့်ပြည်တွင်းသိုလှောင်မှုအတွက်တ ဦး တည်း။ Android 4.x နှင့်အနိမ့်ဗားရှင်းများတွင် Fresco သည်ပုံရိပ်များကို Android မှတ်ဉာဏ်အထူးနေရာတွင်ထားရှိသည်။ ဒီနည်းကသင့် application ကိုမြန်မြန် run နိုင်ဖို့နှင့် OutOfMemoryError ကြောက်ခြင်းကိုမကြာခဏတွေ့ကြုံခံစားစေသည်။ "
Fresco သည်ဓာတ်ပုံပိုက်လိုင်းတိုးတက်ခြင်းနှင့်ဒေတာနှင့်စီပီယူအသုံးပြုမှုကိုချွေတာခြင်းအပြင်ရုပ်ပုံတင်သည့်အချိန်အထိပုံရိပ်တစ်ခုကိုတင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ရုပ်ပုံသည်ဖန်သားပြင်မှထွက်သွားသောအခါ၎င်းသည်၎င်း၏မှတ်ဉာဏ်ကိုအလိုအလျောက်လွတ်စေသည်။ "
မှတ်ချက်ဖြေ - ဒီလျှောက်လွှာနဲ့ပါတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုအောက်မှာကြည့်ရှုနိုင်တယ် link ကို.
"Android မှာထိရောက်တဲ့ User Interfaces တွေတည်ဆောက်ဖို့ကြေငြာတဲ့မူဘောင်။ "
သူ့နေစဉ် GitHub အပေါ်က်ဘ်ဆိုက် အောက်ပါအတိုင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပါ -
Litho သည် declarative Framework တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည် user interface ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုသတ်မှတ်ရန် declarative API ကိုအသုံးပြုသည်။ မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့သွင်းအားစုများအပေါ်မှာအခြေခံပြီးသင်၏သုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်၏ဒီဇိုင်းကိုဖော်ပြရုံသာမကကျန်အရာများကိုမူဘောင်ကဂရုစိုက်ပါသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဒီဇိုင်းတစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည်၎င်း၏ချည်ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိဘဲ user interface ကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီကြိုတင်တိုင်းတာခွင့်ပြုသည်။ "
Litho ကပိုမိုရိုးရှင်းတဲ့အမြင်အဆင့်ဆင့်ကိုစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ Yoga (Flexbox ကိုသုံးထားတဲ့ Cross-platform ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်) ကိုသုံးတာကြောင့်၎င်းရဲ့ UI ပါ ၀ င်တဲ့ ViewGroups အရေအတွက်ကိုအလိုအလျောက်လျှော့ချပေးပါတယ်။ ၎င်းသည် Litho ၏စာသားပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်အတူပိုမိုသေးငယ်သောအမြင်အဆင့်ဆင့်များကိုခွင့်ပြုပေးပြီး scrolling နှင့် memory performance ကိုလည်းတိုးတက်စေသည်။ "
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ၏ဤဒုတိယတူးဖော်ရေးအပေါ် «Facebook Open Source», Technological Giant ၏တီထွင်ထားသောအသစ်တစ်ခု၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်း။ အသုံး ၀ င်သောပွင့်လင်းသောလျှောက်လွှာအသစ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်းပါ «Facebook»; တစ်ခုလုံးအတွက်, ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » FOS-P2: ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော Facebook Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁
Rclone 1.54.1: လက်ရှိတည်ငြိမ်သောဗားရှင်းအသစ်နှင့်အင်္ဂါရပ်များဘာလဲ